नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : के यि बुढी आमा, बाबु आमा, फुपु, दाजुको आँशुले नेपाली "बिन लादेन" प्रचण्ड र बाबुराम र तिनका मतियार हरुलाई नपोल्ला !! भिडियो आफै बोल्छ !
के यि बुढी आमा, बाबु आमा, फुपु, दाजुको आँशुले नेपाली "बिन लादेन" प्रचण्ड र बाबुराम र तिनका मतियार हरुलाई नपोल्ला !! भिडियो आफै बोल्छ !
यि अपराधी हत्याराहरुका सात पुस्तालाई समेत असर नगर्ला ?! यसै गरेर यि हत्याराहरुले सत्र हजारका लाश ओछ्याए तर बिडम्बना अहिले उनिहरु एमाले, काङ्रेस, रा.प्र.पा लगायत का नपुँशक दलहरु र तिनका महा हिजडाहरुको बुइ चढेर नेपाली बिन लादेनहरु राज गर्दैछन ! अब अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका नघच्घच्याए सम्म कसैले न्याय पाउँला भन्ने नसोंचे हुन्छ जस्तो देखिँदैछ नेपालमा, किन कि हिजडाहरु माझ मर्द खोज्नु मुर्खता हुन्छ कि ! होइन र ?
भिडियो : डिसी नेपाल